UMongameli weqembu uthi amalungu awabumbane | News24
UMongameli weqembu uthi amalungu awabumbane
IQEMBU lezombusazwe i-National Freedom Party (NFP) libambe umhlangano wesifundazwe ngoMgqibelo, ngomhlaka 17 kuMandulo (September), eNtshawini, KwaDukuza, ukwethula izinhlelo zokuvuselela nokulungiselela leliqembu ngaphambi kokhetho lukazwelonke ngo-2019.
USihlalo weNFP kulesi sifundazwe uMnuz Vikizitha Mlotshwa wengamele lo mhlangano wethula umlayezo kaMongameli weqembu uNkk Zanele Magwaza-Msibi.
UMnuz Mlotshwa ufunde umlayezo kaNkk Magwaza-Msibi kanje: “Ngithokoza kakhulu ukuba ngithole isimemo sokuba yingxenye yalomhlangano. Kepha ngithanda ukudlulisa amazwi okuxolisa ngokungaphumeleli ukuba phakathi kwenu ngenxa yezizathu eziphathelene nempilo yami. Kodwa ngifuna ukuninika isiqiniseko sokuthi sengizizwa ngingcono kakhulu kunesikhathi abaningi benu abangibona ngaso ezinyangeni ezimbili ezedlule.
“Futhi ngithanda ukugcizelela ukuthi ngingcono kakhulu ngoba nangale kokuthi odokotela basho kanjalo, nami uqobo ngizizwa kanjalo. Ngikusho lokhu ngoba kuningi okukhulunywayo ngesimo sempilo yami. Okungiphatha kabi ukuthi akukhulumi kuphela labo esiphikisana nabo ngokwezepolitiki, kukhona nabangaphakathi ezinhlakeni zeqembu abakhuluma imibhinqo, abanye basho nokusho ukuthi iqembu ngilihola ngilele embhedeni. Loluhlobo lwenkulumo iyangihlukumeza kakhulu, ikakhulu uma ikhulunywa ngaphakathi eqenjini.”
UMnuz Mlotshwa uqhube wathi kuyisifiso sikaMongameli waleliqembu ukuthi lo mhlangano uzosetshenziselwa ukuthi amalungu alo akwazi ukubhekana nezinselele ezibhekane neqembu njengoba lihlulekile ukuba yingxenye yokhetho lohulumeni basekhaya.
Uthe kungumbono kaNkk Magwaza-Msibi ukuthi labo abenza ukuthi leliqembu lingabi yingxenye yokhetho lohulumeni basekhaya kumele bathathelwe izinyathelo ezifanelekile.
Uthe: “Kuyakhathaza kakhulu ukuthi kukhona abaholi baleliqembu abakwazi ukukhuluma nabezindaba beziphendulele kodwa abakaze bekwazi ukuzehlisa bezoxolisa kumalungu aleliqembu ngalokhu okwenzeka,” kusho uMnuz Mlotshwa efunda umlayezo kaMongameli waleliqembu.
Uqhube wathi uNkk Magwaza-Msibi unethemba lokuthi lo mhlangano uzovuselela leliqembu kodwa kumele amalungu aqaphele engazitsheli ukuthi konke sekulungile kodwa akwazi ukuthola indlela eyaphambili umakuphethwa umhlangano.
Uthe: “Lo mhlangano uzophendla indlela eya kwinkomfa yokukhethwa kobuholi beqembu kanye nokhetho lukazwelonke lwango-2019. Umbuzo obalulekile okumele sizibuze wona uthi: sikulungele yini ukubhekana nezithiyo ezizoqhamuka?” kusho uMnuz Mlotshwa efunda umlayezo kaNkk Magwaza-Msibi.
Uqhube wathi uMongameli waleliqembu ufisa ukuxwayisa amalungu alo ukuba aqaphele abaholi abanezinhloso ezingahambisani nombono weqembu namalungu alo.
Uthe: “Ngaphambilini sakhetha abaholi ngoba sinethemba lokuthi bazosiholela lapho esasihlose ukuya khona kodwa bahluleka basiholela kwinhlekelele enkulu. Kumele siqinisekise ukuthi asiliphindi lelophutha lokukhetha ubuholi obungekho qotho,” kusho uMnuz Mlotshwa efunda umlayezo kaNkk Magwaza-Msibi.
Uqhube wathi uMongameli uthe uma amalungu aleliqembu ekuphokophelele ukusingatha inkomfa yokukhethwa kobuholi beqembu ngenyanga kaZibandlela (December) kumele aqinisekise ukuthi zonke izinto nezinhlaka zeqembu zimingomumo.
Uthe uNkk Magwaza-Msibi unxuse amalungu eqembu ukuba abumbane futhi agweme ukuthi imali idlale indima ekwenzeni uqhekeko kuleliqembu.
UMnuz Mlotshwa ufunde umlayezo kaMongameli waleliqembu kanje: “Njengo Mongameli lento iyangikhathaza kakhulu ngoba ingaba nomthelelo ongemuhle eqembini lethu.”
UNkk Magwaza-Msibi wagula kakhulu waze wangeniswa esibhedlela ngonyaka ka-2014.